बायर्नलाई बुन्डेस्लिगा उपाधि | Hamro Khelkud
बायर्नलाई बुन्डेस्लिगा उपाधि
निख (एजेन्सी) – बुन्डेस्लिगा उपाधि पक्का गरिसकेको बायर्नले सिजनको अन्तिम खेलमा फ्राइबर्गलाई ४-१ ले पराजित गर्दै सिजनको सुखद अन्त्य गरेको छ। यसअघिनै बुन्डेसलिगाको उपाधिमा कब्जा जमाएको बायर्नकालागि कप्तान फिलिप लाम र जाबी अलोन्सोको करियरको अन्तिम व्यावसायिक खेल थियो ।
अन्तिम दिनको महत्वपुर्ण नतिजाहरु
१. डर्टमण्डको च्याम्पियन्स लिगमा स्थान
२. रेलिगेसनको लडाईमा ह्यामबर्ग बिजयी
खेलको सुरुवातमै घरेलु टोलीले अग्रता लिएको थियो। चौथो मिनेटमा जाबी अलोन्सोको पासमा आर्जेन रबेनको गोलबाट अग्रता लिएपनि म्युनिखले दोस्रो गोल भने ७३औं मिनेटमा पायो । आर्टुरो भिडालले गोल गर्दै म्युनिखको अग्रता दोब्बर गरेपनि त्यसको ३ मिनेट पछि निल्स पिटर्सनले फ्राइबर्गलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरेका थिए । बायर्नका लागि फ्रान्क रिबेरी र जोशुआ किम्मिच इन्जुरी समयमा गोल गर्दै म्युनिखलाई सहज जिततर्फ डोर्याएका थिए ।
बायर्नले ८२ खेलसँगै अंक तालिकाको शीर्षस्थानमा अन्त्य गर्यो भने फ्राइबर्ग सातौ स्थानमा झर्यो । बायर्नले यस सिजन घरेलु मैदानमा अपराजित रहँदै उपाधि जितेको हो। त्यस्तै डर्टमण्डले वेर्डर ब्रेमेनसँगको रोमान्चक ४-३ को जितसँगै तेस्रो स्थानमा सिजन अन्त्य गर्दै च्याम्पियन्स लिगमा स्थान सुनिश्चित गर्यो ।
त्यस्तै रेलिगेसनको लडाईंमा ह्यामबर्गले वल्फ्सबर्गलाई हराऊँदै बुन्डेसलिगामा कायम रह्यो भने वुल्फ्सबर्ग २-१ को हार पछि तल्लो डिभिजनमा घटुवा भयो । ह्यामबर्ग बुन्डेस्लिगा इतिहासमै अहिलेसम्म घटुवा नभएको टोली पनि हो।